विषम परिस्थितीमा होटल व्यवसायी प्रती उत्तरदाइ र जवाफदेहि हुनुपर्छ :सचिव घिमिरे :: निलम पंत :: विषम परिस्थितीमा होटल व्यवसायी प्रती उत्तरदाइ र जवाफदेहि हुनुपर्छ :सचिव घिमिरे
बुधबार, असार १६, २०७८ निलम पंत
गत बर्षदेखि सल्बलाएको कोरोनाले थलापरेको होटल व्यवसाय दोस्रो लहरको कोरोना आएपछि झन डामाडोल भएको छ । यो पटक पनि बैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी हुँदा सीमावर्ती शहर वीरगन्ज लगायत प्रदेश २ को साथै मुलुकभरका होटल व्यवसाय डामाडोल भएको हो । कोरोनाको बन्दमा त झन् घर भाडा तिर्नलाई पनि होटलले उल्टो आर्थिक जुटाउनु परेको अवस्था छ । हामी होटल व्यवसायी २ देखी ३ बर्ष फेरी पछाडी धकेलिएका थियौ । फेरिको बन्दीले अब चाही होटल व्यवसाय धान्न सक्ने स्थिति छैन ।
धेरै होटल व्यवसायीहरु लकडाउन खुले पश्चात होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा र्फकन पनि सक्ने नर्फकन पनि सक्ने बताउँछन होटल तथा पर्यटन ब्यवसायी संघ महोत्तरी का सचिव नारायण घिमिरे आजको अकंमा मध्य नेपाल सन्देशको लागी निलम पंतले गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
१ लकडाउन भन्दा पहिला होटेलको अबस्था कस्तो थियो ?
लकडाउन भन्दा पहिला होटेलको अबस्था राम्रो थियोे ।अधिकांस होटलहरु पुर्ण क्षमतामा संचालित थियो ।समग्रमा ब्यवसाय बाट ब्यवसायी संतुष्ट थियौ ।
२) बर्तमान अवस्था यानिकी लकडाउनले होटल ब्यवसायमा कस्तो असर परको छ ?
यतिखेर होटलहरु पुर्ण रुपमा बन्दा बन्दिमा छन । ब्यवसायीहरु चौर्तर्फी मारमा परेका छन । होटल ब्यवसाय ब्यवसायिको लागि गलाको हड्डि निल्नु न वकल्नुको अबस्थामा छ ।छोडे सधै ब्यवसायबाट पलाएन हुन पर्ने, नछोडे ब्यवसायिक खर्च धान्न नसकिने अवस्था एकदम नाजुक रहेको छ । संसार भरका होटेल तथा पर्यटन ब्यवसाय धराप भएको बखत मुलुकका होटेल तथा पर्यटन ब्यवसायले फस्टाउन सक्ने कुरै भएन ।यहाँको होटल ब्यवसाय पुर्ण रुपमा धारासायी बनेको छ । ब्यवसायमुखी कानुनको अभावमा थिलथिलो बनेका होटल ब्यवसायिहरु बन्दा बन्दिको मारले झनै दुखी भएका छन।
३) बर्तमान अवस्थामा होटल ब्यवसाय संचालन गर्न कतिको चुनौति देख्नु हुन्छ ?
यो बेला कोभिड १९ को कारण पुरै धर्ती शोकमग्न भएको छ । आजको आवश्यकता भनेको बाँच र समाजलाइ पनि बचाउ भन्ने नै हो । हामीसग यतिखेर एकातिर कोभिड १९ को त्रास छ भने अर्का तर्फ चुर्लुम्म डुब्दै गएको ब्यवसायको चिन्ता छ । केहि ब्यवसायिहरु ब्यवसायबाट पलायन हुने तरखरमा छन । अब होटल ब्यवसाय संचालन हुनसक्ने अबस्था छ कि छैन? भन्नू भन्दा पनि ब्यवसायिलाइ कसरी ब्यवसायमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने अहम सवाल हो । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन ब्यवसाय र पर्यटन ब्यवसायको मुल आधार नै होटल ब्यवसाय लाई टिकाइ रहन स्वयम् राज्य लागिपर्नु पर्दछ । अन्यथा ब्यवसायिको मात्र एक्लो प्रयत्नले केही हुन सक्दैन । राज्यका नीति नियमले हामीलाई कता लैजान्छ सोही अनुरुप हामिले आफ्ना योजना बनाउने हो । अहिले नै यसै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन।
४) घरभाडा,विद्युत,पानी महसुलमा र करमा छुट भएको छ कि छैन ?
घरभाडाको सवालमा घर धनी हरु घर भाडा छुट दिन तयार छैनन् । विद्युतको र पानीको पनि महसुलमा छुट भएको छैन । जहा सम्म करको सवाल छ यस्मा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम नै हुनेछ भन्ने कुरामा ब्यवसायी हरु आसाबादी छन ।
५) पहिलो चरणको लकडाउन बिचमा होटल खुल्दा आम्दानी कस्तो थियो ?
ब्यवसाय भर्खर भर्खर बामे सर्ने अबस्था पुगेको थियो । लकडाउन खुलेपनी स्वदेशी पर्यटक हरु घुमफिरमा निस्कन डराइ रहेका थिए भने बिदेशी पर्यटक हरुको आगमन थिएन मुस्किलले केही होटल हरुले दैनिक खर्च सम्म धान्ने अबस्थामा पुगेका थियौ भने केही होटल हरुको दैनिक खर्च समेत धान्न नसकिरहेको अबस्था थियो ।
६) कर्मचारी कटौती गर्नु भयो की ?
कर्मचारी हरु छन ।यतिखेर उहाँ हरुलाइ बिदामा घर पठाएको अबस्था छ ।
७) कर्मचारीलाई तलब कसरी दिनुभएको छ ?
आपसी समझदारीमा तय गरे बमोजिम हुने गरि व्यवस्था मिलाएका छौ ।
८) कोरोना महमारी कहिले सम्म रहने हो थाहा छैन यस्तो अवस्थामा ब्यवसाय कसरी संचालन गर्ने ?
यतिबेला हाम्रो सोच गौण हो, राज्यको सोच प्रमुख हो । राज्यले आफ्ना ब्यवसायीलाइ कसरी लैजान्छ सोही अनुरुप ब्यवसायिक योजना बनाउदा उत्तम होला । अहिले नै हामिले यसो गर्छौ भन्दा हतारो हुन्छ कि?रुग्ण अबस्थामा रहेको होटल ब्यवसायलाइ पुर्नः जीवन दिनु त्यो पनि २,३ बर्ष सम्म, आजकै अबस्थामा कठिन छ ।
९ ) लकडाउन खुले पछि होटल ब्यवसायलाइ कसरी संचालन गर्ने ?
हामी ब्यवसायिको लागि यो अहम सवाल हो । पुरै ब्यवसायीलाइ यसै चिन्ताले सताएको छ। आर्थिक रुपमा थिलथिलो बनेको हाम्रो ब्यवसायलाइ पुनैः जीवन दिनु आफैमा चुनौतीपुर्ण कार्य हो । चौतर्फी अभावमा रहेको यो ब्यवसाय संकट ग्रस्त अबस्थामा छ ।मैले माथी पनि भनेको छु, । अब राज्यले होटल ब्यवसायिको लागि कस्तो नीति अख्तियार गर्छ सोही अनुरुपनै हाम्रो योजना बन्ने हो ।अहिलेनै यसै गरि संचालन हुन्छ भन्ने अबस्था छैन ।राज्य आम्रो अभिभावक हो,यो विषम परिस्थितिमा राज्य हामी प्रती उत्तरदाइ र जवाफदेहि हुन्छ भन्ने हाम्रो बिस्वास छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १६, २०७८ १६:०६